ကြက်ဟင်းခါးသီး၏ အကျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြက်ဟင်းခါးသီး၏ အကျိုး
Posted by ခင်ခ on Dec 10, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 20 comments
အပင်၏ပုံစံမှာ နွယ်ပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါ၏။ ပင်စည်ပျော့ပြောင်း၍ နှာမောင်းရှိသည်။ အရွက်များ အစိမ်းရောင် လက်ခြားပုံ ဖြစ်ပြီး အပွင့်များဝါ၍ အသီးအရောင်စိမ်းပါသည်။
ခါးသက်သက် အရသာရှိတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးဟာ အပူပိုင်း စိုစွတ်တဲ့ရာသီမှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် အာရှတိုင်းပြည်တွေနဲ့ တောင်အမေရိကတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အရသာက ခါးသက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရှိပါတယ်။
အာဟာရတန်ဖိုးကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ ကယ်လိုရီပါ ဝင်မှု အလွန်လျော့နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အများ အပြား ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B1 ၊ B2 နဲ့ B3၊ ဗီတာမင် စီ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဖော လစ်အက်စစ်၊ ဇင့်(သွပ်)၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ မဂ္ဂနိစ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တို့ ကောင်းစွာ ပါ ဝင်နေပါတယ်။ သံဓာတ်ပါဝင်မှု များပြီး ဘီတာကယ်ရိုတင်းပါဝင်မှုဟာ ပန်းဂေါ်ဖီ စိမ်းထက် နှစ်ဆ၊ ကယ်လ်စီယမ် ပါဝင် မှုကဟင်းနုနယ် ရွက်ထက် နှစ်ဆနဲ့ ပို တက်စီယမ်ပါဝင်မှုက ငှက်ပျောသီးထက် နှစ်ဆ အသီးသီး ပါဝင်နေပါတယ်။ ကြက် ဟင်းခါးသီးမှာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် ကို ကျစေတဲ့ အာနိသင်ရှိသလို Polypeptide P လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဆူ လင်လို ဒြပ် ပေါင်းတစ်မျိုးလည်း ပါဝင်တာကြောင့် ဆီး ချိုရောဂါရှိသူတချို့အတွက် ကောင်းကျိုး ရှိကြောင်း လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ သွေးထဲမှ သကြားဓာတ်ကို လျော့စေသော နောက်ဆုံးပေါ် ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းသည် ကြက်ဟင်းခါးသီးဖြစ်၏။
ကြက်ဟင်းခါးသီးအရည်ဟာ သွေး ဆိပ်သင့်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာနဲ့ ယား ယံမှုတွေကို ကုသရာမှာ အလွန် အကျိုး ကျေးဇူးများပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက် ဟင်းခါးသီးအရည်ကို သံပရာရည်နဲ့ ရောကာ အစာမရှိချိန် ဖြည်းဖြည်းချင်း ငုံပြီး နေ့စဉ်သောက်ပေးရင် ၄-၆လ အ ကြာမှာ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုကို တွေ့ရပါ တယ်။
ကာလဝမ်းရောဂါ အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ကြိတ်ခြေထားတဲ့ ကြက်ဟင်းခါး ရွက် လက်ဖက်စားဇွန်း နှစ်ဇွန်းနဲ့ ကြက်သွန်နီအရည် လက်ဖက်စားဇွန်း နှစ်ဇွန်း၊ သံပရာရည် လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်း တို့ကို ဆတူရောပြီး နေ့စဉ် သောက်ပေး ပါ။
ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ ပါတဲ့ အပင် ထွက်အင်ဆူလင်ဟာ ဆီးနဲ့ သွေးထဲက သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေတဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး ရှိပါတယ်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးဟာ သွေးတွင်း အင်ဆူလင်အဆင့်ကို တိုးစေတာမျိုး မရှိဘဲ ဂလူးကို့စ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို သိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီး အရည်ကို ပုံမှန် သောက်ပေးတာကြောင့် စွမ်းအင်နဲ့ သက် လုံကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျစေပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ ဘီတာကယ်ရို တင်းနဲ့ တခြားအာနိသင်တွေ ပါဝင်မှု မြင့် မားတာကြောင့် မျက်စိပြဿနာ တွေကို ကင်းဝေးစေပြီး အမြင်အာရုံကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးအရည်ဟာ အ ရက်နာကျတဲ့ ဝေဒနာကို ကုသရာမှာ ကောင်းကျိုး ရှိပါတယ်။ အရက်သောက် တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းဝေဒနာ တွေကို ပြုပြင်ပေးပြီး အသည်းကို သန့် စင်စေပါတယ်။
(၇) ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းမွန်ခြင်း
ကြက်ဟင်းခါးသီးအရည်ဟာ ကိုယ် ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်အောင် တည်ဆောက်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရောဂါ တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးရွက်ကရတဲ့ အရည် လက်ဖက်စားဇွန်း သုံးဇွန်းကို ထောပတ်၊ နို့ တစ်ဖန်ခွက်နဲ့ ရောကာ နံနက် တိုင်း အစာမရှိချိန်မှာ သောက်ပေးရင် တစ်လအကြာမှာ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ လိပ်ခေါင်းက နာကျင်နေရင် ကြက်ဟင်းခါးပင်ရဲ့ အမြစ်ကို စေးပျစ်အောင် ကြိတ်ပြီး လိပ်ခေါင်းပေါ်မှာ အုပ်ပေးပါ။
ကြက်ဟင်းခါးရွက်အရည်ကို ပုံမှန် သောက်ပေးရင် ဆိုးရီးယေးစစ်နဲ့ တခြား ဖန်းဂပ်စ်မှိုစွဲတဲ့ အရေပြားအနာ တွေကို သက်သာစေပါတယ်။
(၁၀) အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ
လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီး အရည် နှစ်အောင်စနဲ့ ရေရောထားတဲ့ ပျားရည်တစ်ခွက်ကို ရောသောက်ပေး ရင် ပန်းနာရင်ကျပ်၊ လေပြွန်ရောင်တာ စတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ သတိပြုရန် ဆီးချိုကုသဆေးသောက်နေတဲ့ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးအရည် မသောက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အလွန်အမင်း စားသောက်တာမျိုး ရှောင်သင့်ပါဟုသိရပါကြောင်း ဖတ်ဖူးတဲ့စာပေစုမှ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေကို သိပေမယ့် ဒီလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိသေးဘူး ကျေးဇူးပါလေးခ လိပ်ခေါင်းလည်း ပျောက်တယ်ဆိုတော့ ဦးလေးအံစာတုံးကို လက်တို့လိုက်အုံးမယ်
လေးခလည်း ရောဂါအပေါင်း ကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေရှင်
ဦးဆုံးကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဗုံဗုံရေ။
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို လုံးဝမကြိုတ်ပေမယ့် ဗဟုသုတ အလိုငှာ
ဖတ်ရှု့လေ့လာသွားပါတယ် . . . . . .
ရေနွေးကြိုက်တဲ့candle ကို နိုင်ငံခြားသား ” တ ” တစ်ယောက်က
သူတို့ လက်စွဲဘဲ စမ်းကြည့်ဆိုပြီး လက်ဆောင်ပေးတယ်.. တစ်ခါ တစ်ရံ လက်ဖက်ခြောက် အစားထိုးသုံးပါတဲ့..ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်..
ဝက်သား ( သို့ ) ပုဇွန်ခြောက်တို့ နဲ့ ကြော်စား ချက်စားတာ အရမ်းကြိုက်ပေမဲ့ ..
လက်ဖက်ခြောက် အစားထိုးသုံးတာတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး..
အခု ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီးတော့မှ အကျိုးများတာ သိရတယ်..ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ ကိုခင်ခ ရေ.. candle ကသွေးနည်းနည်းတိုးတတ်တော့ သုံးလို့ သင့်တော်ပါ့မလား..အကြံလေးတော့ ပေးပါဦး နော်..
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အရမ်းကြိုက်ပေမဲ့ ..ကြက်သားနဲ့ မတဲ့ ဘူးပြောလို့ အမြဲမစားဖြစ်ဘူး။
ကြက်ဟင်းခါးသီး စိမ်းစိမ်းကို ရွေး အစေ့ဖယ်ပြီး အစိမ်းအတိုင်း ထမင်းနဲ့ စားတယ်။
တချို့ က ကြက်သားနဲ့ စားရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးကသွေးတက်စာဖြစ်သလို၊ ကြက်သားအရေခွံကလည်း သွေးတက်စာဖြစ်လို့
ရောစားရင်း သွေးတိုးအခံရှိသူများ မူးဝေစေတဲ့ သဘောရှိတာပါ။ မိမိသွေးတက်နေလားကို အပြင်ပန်းအရ သိနိုင်ခဲတာမို့ သီးခြားစီစားခြင်းသည် ဘေးကင်းစေပါတယ် The best ခင်ဗျ။
အခါးဆိုရင်တော့ စားရမှာ ကြောက်ပေမယ့်..ဆေးအနေနဲ့တော့ အခါးရည်ကို သောက်ပါတယ်..
တစ်ခါတလေ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော် ခါးရုံနဲ့ ထမင်းစားရတာလည်း မြိန်ပါတယ်…
ဘဲဥရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ ဒေါက်တာ ခင်ဂဇက်ခ ကိုလည်း နောက်ကျော မြင်ဖူးသွားကြောင်းပါ…
မနှင်းနှင်းရေ ကျွန်တော်က အခါးရည်ကို အချိုရည်လေးရောပြီး တစ်ခါတလေတော့လည်း မှီဝဲသဗျို့။
နောက်တာပါ။ အသက်အရွယ်ရလာရင် အခါးအသီးအနှံစားပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
….သြော်..ထန်းလျက်ရည် ရောသောက်လိုက်လို့ ရတာပေါ့လေ….လို့..
လေးခရေ … ခုတစ်လော လေးခပို့စ်တွေမဖတ်ဖြစ်ဘူး …. ဒီပို့စ်လေးကိုလည်း မနေ့ကဖွင့်ထားပြီး ဖတ်ရင်း တန်းလန်းဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ ဒီနေ့သေချာဖတ်ဖြစ်တယ် …. အဲဒီအထဲက ဆေးနည်းတစ်နည်းတော့ မှတ်သားသွားပါတယ် …. ညီမအသိစိတ်ထဲမှာ ကြက်ဟင်းခါးသီးစားရင် တက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ မစားဖြစ်ဘူး … ခါးတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူး … ကြက်ဟင်းပေါင်းသီးဆိုလားမသိ … အဲဒါတော့ကြိုက်တယ် .. သူကမခါးဘူး ……..
ညီမသိတဲ့ နည်းလေးတစ်ခု ထပ်ဖြည့်ပေးပါရစေ …. ကျီးပေါင်းတက်သူတွေအတွက် ….. ကြက်ဟင်းခါးရွက် ရယ်၊ တရင်းကြီးရွက်ရယ်၊ ရှောက်ရွက်ရယ်၊ ဆားလက်တဆုပ်ရယ် ရောထုပ်ပြီး ကြက်ပူထိုးပေးရင် ကျီးပေါင်း သက်သာတာ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါကြောင်း ……….
ကြက်ဟင်းခါးသီးရဲ့ လက်တွေ့အကျိုးထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ မမခိုင်နှင့် ကွန်မန့်ပေးကြသောသူအပေါင်း ခင်ခ မှကျေးဇူးပါနော်။
အိပ်တဲ့ကိတ်စမှာ ပြဿနာရှိနေတာနဲ့အတော်ပဲဗျာ
ကြက်ဟင်းခါးသီးအရည် ကို သောက်ကြည့်ဦးမယ်
အသီးအစိမ်းကို မွှေစက်နဲ့ ချေလိုက်ရင် အရည်ရတာလား လေးခရဲ့ 
ကြက်ဟင်းခါးသီးကိုပုဇွန်ဆိတ်များများလေးနဲ့ ငပိ၊ငရုတ်သီးစိမ်းလေးနဲ့အိုးကပ်လေးချက်တာကြိုက်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် သူရဲ့ Original အရသာလဲမပျောက်ဘဲ တခြားစားလို့ကောင်းမယ့် Recipe လေးရှိလို့ရှိရင်မျှပေးကြပါအုံး
ဂျပန်အိုကီနာဝါက.. ဂိုယ(ကြက်ဟင်းခါးသီး) ချက်နည်းလေး.. ရှာတင်ပေးလိုက်တယ်..
YoTube Video = http://www.youtube.com/watch?v=bp-a5y8rY28
Goya Champuru – 1
3 cups Goya Bitter Melon
1 block of firm or extra firm Tofu – Drained and cubed into 1/2″ squares
1/2 lb cooked Pork or Spam thinly sliced
1 tsp. Hondashi or Konbudashi – Granulated Bonito Stock
Wash and cut Goya in half lengthwise and remove the seeds withaspoon. Cut Goya into thin slices so they look like small cresent moons. Sprinkle salt over the goya inabowl and let sit for 10 minutes or more. The salt helps draw moisture from the fruit. Wash the fruit inastrainer under running water. Next squeeze the moisture out of the goya allowing the juice to be removed. This will remove some of the bitterness of the goya. Place the olive oil inawok or large frying pan and bring the temprature up to high. Saute’ the tufu until it browns and set it to the side. Add more oil to the same pan and saute’ the goya. Once the goya reaches the desired degree of cooking (crisp or vell cooked) add the beaten eggs and stir fry forafew minutes. near the end add the tofu you prepared, meat, soy sauce, and hondashi. Mix well being careful not to break up the tofu too much. Serve warm and enjoy.
သူကြီးရေ ပုံကြည့်တာနဲ့တင် စားကောင်းမယ်ပုံဘဲဗျ။
In the Okinawan dialect champuru means “mixture.”
Goya champuru isastir-fried mixture of sliced Goya (bitter melon) and local tofu,
with slices of pork. It is so popular it is considered the staple dish of Okinawa.
‘ ကြက်ဟင်းခါးသီး အမွှေကြော်/အရောကြော် ‘ ပေါ့
သဂျီးပြောတဲ့ Hondashi ဆိုတာက ငါးအသားမှုန့်ပဲ။ ပါဝင်တဲ့ ဟင်းအမယ်တွေက ၀က်သားကလွဲလို့
ဈေးမကြီးပေမယ့် အဲ့ ငါးမှုန့်ကတော့ ဈေးကြီးတယ်…Amazon မှာတော့ 5.28 Oz. ကို $ 8.75 ပါတဲ့…City Mart မှာများ ရှိနိုင်မလား…
အဲ့ငါးမှုန့်က ဂျပန်ဟင်းလျာအတော်များများရဲ့ အခြေံပဲ..စွပ်ပြုတ်၊နှပ်ချက်၊ဟော့ပေါ့ စတဲ့ဟင်း
တွေမှာ သုံးသလို ဆန္ဒရှိသလို ဟင်းတွေမှာ ထည့်သုံးတယ်..ကြက်သားမှုန့် ကြိုက်သလို
ကြုံတုန်း သံလွင်ဆီကို တစ်ပတ် ၃ရက်၊ တစ်ယောက်စာပဲ ချက်စားနေပါပြီ..ကိုခရေ..ကျေးဇူးပါ..
ပုလင်းသေး စမ်းသုံးကြည့်နေတာ ဟန်ကျပါတယ်…
Breast Cancer လည်း အထိုက်အလျောက်တော့ ကာကွယ်နိုင်တော့မယ်…
ကိုယ့်ပိုက်ပိုက်တွေလည်း ပိုကုန်နေရပါပြီ… :P…
ငါးမှုန့်မပါ သဂျီးဟင်းလည်း စမ်းချက်ကြည့်မယ်…
ကြက်သားမှုန့်ထည့်လိုက်ရင်တော့ အရသာကွဲသွားမယ် ထင်တယ်…
သံလွင်ဆီကတော့ အနံ့က Extra Virgin ၀ယ်မိလို့လားမသိ…စိမ်းရွှေရွှေ၊စူးရှရှနဲ့ ရှုကြည့်ရင်
မူးမိတယ်..ဆီအရသာကလည်း ဖန်တန်တန်နဲ့..ဆီသတ်ရင်လည်း ပဲဆီမွှေးသလို မွှေးဘူး.
ညှော်သလိုပဲ။ စသုံးစ အကျင့်မရသေးလို့လား မသိဘူး။
ချက်လိုက်တော့လည်း အရသာက ကောင်းပါတယ်။
၀ယ်သုံးချင်သူများအတွက်လည်း အောက်မှာ ဆီ အညွှန်းပါ။
BORGES တံဆိပ်(product of Spain),100% EXTRA VIRGIN Olive Oil,16.9 Fl. Oz.(500 ml)
500 ml = 0.5 Liter ဆိုတော့ ရေသန့်ဘူးသေးလောက်တောင် ဆီက ပါဘူး…..3800 ကျတယ်..
ပုလင်းအကြီးက ဘယ်လောက်ပါလဲတော့ မသိ….9700..ပါ..
‘ OKI ‘ Soya Bean/Corn Oil2Litres (2000 ml) မှ 4500,4800 ဆိုတော့
မိုးထိခေါင်ဖျား တင်ထားတဲ့ အဲ့ဆီပုလင်းကို ခုံနဲ့ယူပြီးချ၊ ပြီးတော့ တွက်ချက်၊ပွတ်သပ်၊
အနုလုံ၊ပဋိလုံ ကြည့်ပြီးမှ ၀ယ်ခဲ့ရတာ…
မကြည့်ရဲဆုံး Bodybuilder ကြီးသာ ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ခက်ပြီ..လို့..
၀မ်းမှာ ခါး လို့ ဆိုသမို့
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အသားပြုတ်ရည်နဲ့ ထည့်ပြုတ်ပြီး စားလေ့ရှိတယ်။
အခါးမကြိုက်ပေမယ့် စားရင်းနဲ့တော့ ကြိုက်လာသား။ :hee:
ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါလောက်တော့ချက်စားရမယ်
အခါးစားရင် အသားအရည်လှပြီး အသက်ရှည့်ပါသတဲ့ရှင်